Abgaal Dambe Maya Vs Abgaal | Xaqiiqonews
Abgaal Dambe Maya Vs Abgaal
Kooxda Abgaal dambe maya waxay ku doodeysaa in laga soo bilaabo 2004tii beesha abgaal ay soo hogaaminaysay dalka, marna ra’iisulwasaare uu noqday Cali Maxamed Geedi kadibna Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh isu dabamareen madaxweynenimo iyagoo dhammaantood isku heyb ah aysan fursad helin beelihii kale ee hawiye markanna ay xaq u leeyihiin inay helaan kooxdan maadaama isbedelka dadkii ka soo shaqeeyey ee qeyb libaax ah ka ahaayeen.
1.	Iyagoo isbedelka qeyb muhiim ka ahaa uguna hiileyey madaxweyne Farmaajo inay codadkooda siiyaan markii wareegga kowaad dhammaaday gaar ahaan codadkii Cabdiqaadir Cosoble iyo Caddow Cali Gees.
2.	Inay maamulgoboleedka Galmudug oo ay degaan balaaran ku leeyhiin aysan wax xil muhiim ah oo muuqda aysan ka helin, halka Maamulgoboleedka Hirshabeele madaxweyne aan laga siinin islamarkaana caasimadda muqdisho xaqii ay ku lahaayeen la duudsiiyey taasoo la rumeysanyahay in ay ku waayeen xilkii madaxweyne ee ay hayeen.
3.	In arrinku uu ahaa Xasan Sheekh iyo Damjadiid maya ee Abgaalka kale aysan saameyn ku lahayn arrinkan maadaama Xasan sheekh uusan xilka ku joogin abgaalnimo ee uu ku joogay dambjadiidnimo.
4.	In ciidamada difaaca ku jira iyo dhaqaalaha soo gala dowladda dhexe inay lafdhabar u yihiin.
5.	In masuuliyiinta sare ee labada aqal ee baarlamaanka aysan waxba ku lahayn halka kooxda kale madaxweynayaal maamulgoboleed iyo ku xigeen aqalka sare ay heystaan.